Sportshụnanya Egwuregwu Egwuregwu Nnukwu Obi Nnukwu 158CM Obere Ugwu Mmekọahụ Doll Rin
Nwa bebi TPE,Nwa bebi nwoke nke Japan,Nnukwu ara mmekọahụ mmekọahụ,F cup ụmụ bebi mmekọahụ
Ezubere Rin iji gwọọ agụụ agụụ mmekọahụ gị niile ma mee ka abalị gị bụrụ anwansi. O nwere ihe maka onye obula. Ọ na-agbanwe agbanwe ma na-agbanwe agbanwe, na-enye gị ohere ịnụ ụtọ ọtụtụ ọnọdụ mmekọahụ na ya. Ọ na-egosipụta nwanyị nke oge a nke na-enweghị ihere na-adị njikere dinara ala ma gboo mkpa anụ ahụ ya.
Rin bụ onye China. O nwere ihe na-adọrọ mmasị F-iko nnukwu ara. Ọtụtụ ndị mmadụ enweghị ike ịnagide mana ịchọrọ ịta ya. Ọ bụ ngwa ngwa, ngosi, ma eleghị anya, a bit kwa oyi. Nke a bụ ihe a na-ahụkarị maka ndị enyi gbara ya gburugburu. Amuru ya na ezi ulo n’isi obodo. Ọ bụ nwanyị nweere onwe ya mgbe niile. Ọ hapụrụ ụlọ ahụ ruo mgbe ọ gbara afọ iri na ise. Bido ịchọ ndụ nke na-agụsi gị agụụ ike. Mgbe ọ kwapụrụ, o nwetara ọtụtụ nsogbu. Ma ike agwụghị ya. Site n’amamihe na ịnụ ọkụ n’obi ya, ọ dịghị ihe pụrụ igbochi ya iruzuo ọrụ ya. N'oge na-adịghị anya, ọ ga-aghọ ikike n'ike. Iji chee nsogbu nke ndụ ihu, ka a ghara igbu gị. Ọ na-ekwusi ike mgbe niile na ahụike. Nke a ga-eme ka uche ya dị mma. O nwekwara ike ịzọpụta onwe gị na nsogbu. Ma onye maara n'ezie ihe ga-eme; ọ ka na-agba mbọ imeziwanye nkà ya. Ọ na-eche na ụwa karịrị ihe anyị maara. N'ụzọ dị mma, o nwere ọtụtụ ezi ndị enyi na-akwado ya.
Ndepụta nke Rin:
Elu ： 62 sentimita (158cm)
Ibu ibu ： 62 lbs (28kg)
Bust ： 28 sentimita (70cm)
N'úkwù ： 23 sentimita (59cm)
N'úkwù ： 29 sentimita (74cm)
Onyinye ： 5.5 sentimita (14cm)
Ntụ ： 3.9 sentimita (10cm)
Ogwe aka: 18.9 sentimita （48cm）
Lengthkwụ ogologo: 8.3 sentimita （21cm）